Radio Frequency pcb Vagadziri | China Radio Frequency pcb Fekitori & Vatengesi
Isola 370hr Edge kubatira pcb
Iyi gumi yakaturikidzana RF redunhu bhodhi ye telecom indasitiri. RF pcb kazhinji zvinoda laminates pamwe nyanzvi zvemagetsi, chafariz, zvemaziso, kana zvimwe waivako zvechadenga zvinopfuura avo zvetsika mwero FR-4 zvinhu. Nemakore edu mazhinji echiitiko ne PTFE-yakavakirwa microwave laminate, tinonzwisisa kuvimbika kwakanyanya uye kushivirira kwakasimba zvinodiwa kune akawanda mafomu.
RF pcb zvedongo substrate + FR4 substrate
Iyi 6 yakaturikidzana RF redunhu bhodhi ye telecom indasitiri. RF pcb kazhinji zvinoda laminates pamwe nyanzvi zvemagetsi, chafariz, zvemaziso, kana zvimwe waivako zvechadenga zvinopfuura avo zvetsika mwero FR-4 zvinhu. Nemakore edu mazhinji echiitiko ne PTFE-yakavakirwa microwave laminate, tinonzwisisa kuvimbika kwakanyanya uye kushivirira kwakasimba zvinodiwa kune akawanda mafomu.
Iyi i2 yakaturikidzana RF redunhu bhodhi ye telecom indasitiri. RF pcb kazhinji zvinoda laminates pamwe nyanzvi zvemagetsi, chafariz, zvemaziso, kana zvimwe waivako zvechadenga zvinopfuura avo zvetsika mwero FR-4 zvinhu. Nemakore edu mazhinji echiitiko ne PTFE-yakavakirwa microwave laminate, tinonzwisisa kuvimbika kwakanyanya uye kushivirira kwakasimba zvinodiwa kune akawanda mafomu.